Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.
Jijjiiramii maadhee filatame qofa irratti dhiibee uuma. Yoo maadhee walduukkaa filattee, maadhee hedduu walitti aanan mijeessuu nidandeessa.
Gabatee - OfTaasisaa - Yabbina Tarjaa Sireesaa filadhu
Kabala Guutola kamshaa Gabatee irraa bani,
Yabbina Tarjaa Sireesa
Title is: Bal'ina Guutolaa